HAMAKY AMIN'NY TENY Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Slovenianina
NY BAIBOLY MASINA dia tenin’i Jehovah Tompo Fara Tampony, nosoratana ho an’ny olona rehetra eto an-tany. Manintona ny olona maneran-tany io boky nosoratana tamin’ny herin’ny fanahy masina io, satria mirakitra vaovao tsara momba ny Fanjakan’Andriamanitra, izay hitondra fiadanana sy hampanjaka ny fahamarinana. Ho paradisa honenan’ny olona rehetra ny tany amin’ny hoavy. Resahin’ny Baiboly fa tian’Andriamanitra ny olona ka nanao zavatra izy mba hanafahana azy ireo amin’ny fahafatesana. Tsy inona izany fa ny sorom-panavotan’i Jesosy Kristy Zanany.—Jaona 3:16.
Nosoratana tamin’ny teny hebreo sy aramianina (mitovitovy amin’ny teny hebreo) ary grika ny Baiboly, tamin’ny voalohany. Vitsy anefa ny olona mahay an’ireo fiteny ireo ankehitriny, ka mila adika amin’ny fiteny maoderina izy io, mba hahalalan’ny olona avy amin’ny firenena rehetra ny hafatra mamonjy aina ao anatiny.
Nadika avy amin’ilay fanontana amin’ny teny anglisy hoe Ny Soratra Masina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao nivoaka tamin’ny 1984, ity fandikan-teny vaovao amin’ny teny malagasy ity. Ahitana an’ireo boky 39 ao amin’ny Soratra Hebreo sy Aramianina ato, ary koa ny fanavaozana an’ireo boky 27 ao amin’ny Soratra Grika Kristianina tao amin’ilay dikan-teny malagasy navoaka tamin’ny 2003. Sokajin’ny olona ho “Testamenta Taloha” sy “Testamenta Vaovao” ireo boky ao amin’ny Soratra Masina. Hitan’ny Komitin’ny Fandikana ny Baibolin’ny Tontolo Vaovao anefa fa tsara kokoa ny hiantsoana azy ireo amin’ny fiteny nanoratana azy tany am-boalohany. Asa soratra iray ihany mantsy ny Baiboly, ary tsy misy lany andro na azo antsoina hoe “taloha” amin’izy io. Mirindra tsara ny hafatra raketiny manomboka amin’ny boky voalohany amin’ny soratra hebreo ka hatrany amin’ny boky farany amin’ny soratra grika. Mba hanampiana ny mpamaky amin’ny fianarany ny Baiboly manontolo, dia misy fanondroana andininy hafa 125 000 mahery sy fanondroana teny ato.
Mampahafantatra ny sitrapon’ilay Andriamanitra Tompo Fara Tampony eo amin’izao rehetra izao ny Baiboly. Tena manao tsinontsinona, eny, manivaiva ny fahambonian’Andriamanitra sy ny fahefany àry ireo manaisotra na manafina ilay anarana mampiavaka azy, izay miseho efa ho im-7 000 ao amin’ny soratra hebreo. Koa ny mampiavaka voalohany indrindra ity fandikan-teny ity, dia ny famerenany amin’ny laoniny ny anaran’Andriamanitra. Ilay endriny efa mahazatra hoe “Jehovah”, no nampiasaina in-6 973 ao amin’ny Soratra Hebreo ary im-237 ao amin’ny Soratra Grika Kristianina. Jereo ny Fanazavana Fanampiny mba hahitana tsipiriany bebe kokoa.
Tia an’ilay Andriamanitra Niavian’ny Soratra Masina ireo olona nandika an’ity Baiboly ity. Tsapan’izy ireo fa andraikitra lehibe ny mampita ny hevitr’Andriamanitra sy ny teniny amin’ny fomba marina tsara araka izay azo atao. Tsapany koa fa manana andraikitra izy eo anatrehan’ireo mpamaky tia mandalina, izay miantehitra amin’ny fandikana ny Tenin’ilay Andriamanitra Avo Indrindra mba hahazoana famonjena mandrakizay. Manantena izahay fa hanampy ny mpamaky ity fandikan-teny ity mba hahitan’izy ireo ny lalana mitarika ho amin’ny fiainana mandrakizay, dia ilay fiainana ao amin’ny tontolo vaovao sy marina ampanantenain’ilay Andriamanitra Mahery Indrindra.—Isaia 65:17; 2 Petera 3:13.